Atileetonni Itoophiyaa Paaraalimpikii Riyoorratti mormii agarsiisan waggaa sadii booda biyyatti deebi'an - BBC News Afaan Oromoo
Atileetonni Itoophiyaa Paaraalimpikii Riyoorratti mormii agarsiisan waggaa sadii booda biyyatti deebi'an
Image copyright Feyisa Lelisa/fb
Goodayyaa suuraa Atileet Taammiruu Kaffiyaalewiifi Atileet Magarsaa Taasisaa waggaa sadii booda biyya baqattummaan jiraataa turan Biraazil irraa biyyatti deebi'an
Atileetonni Itoophiyaa Paaraalimpikii Riyoo bara 2016 taasifame irratti hirmaatanii sababa mallattoo mormii agarsiisaniin achumatti hafan waggaa sadii booda A.L.I kaleessa Fulbaana 09, 2012 biyyatti deebi'an.
Atileet Taammiruu Kaffiyaalewiifi Atileet Magarsaa Taasisaan Itoophiyaa bakka bu'un paaraalimpikii irratti dorgoman. Mormii booda biyyatti deebi'u sodaanna jechuun waggoota sadan darban baqattummaan biyya Biraazil jiraachaa turan.
Medaaliyaa tokko Itoophiyaan paaraalimpikii Riyoo irratti argatte kan fide atileet Taammiruudha.
Waltajjii Olompikii Riyoo irratti atileet Fayyisaa Leellisaallee mallattoo mormii agarsiisuun waggoota lama erga biyya Ameerikaa jiraate booda waggaa darbe biyyatti deebi'un isaa ni yaadatama.
Atileetonni kuni mootummaan atileet Fayyisaaf waamicha taasisuus unuuf osoo hin taasisin hafe jechuun mufachuu isaanii kana dura BBC'tti himanii turan.
Guyyaa kaleessaa yeroo atileetonni biyyatti galanillee atileet Fayyisaa Leellisaa dabalatee namoonni kaan isaan simataniiru.
Turtii atileetota lamaan, jalqaba Atileet Taammiraat ergasii booda immoo Atileet Magarsaa waliin taasisne kunoo akka asiin gadin isiniif dhiheessine.
BBC: Turtii waggaa sadii booda biyyatti deebitan. Mee miira keessa jirtan nutti himi?
Atileet Taammiruu: Biyyatti waan deebineef guddaa gammanne. Imalli keenya kana duraa haqamee kaleessa yeroo malee geenye malee namoota baay'eetu nu eegaa ture.
Yeroo Magarsaan ija isaa baay'ee dhukkubsachaa turre biyyatti akka galuu barbaannu dubbachaa turre. Amma immoo maatiifi saba keenya jaalannu gidduutti argamuu keenyatti baay'ee itti gammanneerra.
Gammaduu keenyarraa kan ka'e kaleessa hirriba malee bulle.
BBC: Biyyatti akka deebitan eenyutu isin gargaare?
Atileet Taammiruu: Kan nu gargaare Imbaasii Itoophiyaa biyya Biraazil jiru, warri Komishinii Ispoortii fi Koree Paaraalimpikii nu gargaaraniiru.
Keessattuu atileet Daraartuu Tulluun nu waliin dhamahaa turte.
BBC: Kaffaltii imala xiyyaaraa Imbaasii Itoophiyaatu isinii kanfalee?
Atileet Taammiruu: Warri Imbaasii kaffaltii of dandeessu jechuun nu gaafannaan of hin dandeenyu jenneeni. Isaaniis Daandii Qilleensa Itoophiyaaf xalayaa barreessani.
Kanaaf, Daandii Xiyyaara Itoophiyaatu tolaan nu fide.
Goodayyaa suuraa Itoophiyaan Paaraalimpikii Riyoo bara 2016 taasifame irratti medaaliyaa tokko qofa argatte. Innu kan atileet Taammiruun galmeessisedha
BBC: Wayita biyya geessan gama mootummaa irraa eenyutu fa'iitu isiin simate?
Atileet Taammiruu: Simannaa irratti Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaafi kan Koree Paaraalimpikii Itoophiyaa irraa kan dhufan argamaniiru. Kanaan alatti maatiiwwan atileetiksii kan akka atileeti Fayyisaa dabalatee namoonni hedduutu argame.
BBC: Wayita baqqattummaan biyya Biraazil magaalaa Saa'o Pooloo waggaa sadiif jiraattan rakkoon guddaan isin qunname maali?
Atileet Taammiruu: Rakkooleen kaan jiraatanis rakkoo guddaa jedhee keessumaa kan ani baay'ee itti gaddu dhukkuba ijaa atileet Magarsaati.
Magarsaan yeroo jaha ija isaa wal'aansa baqaqsanii hodhuu taasise. Tokko namni nabiratti dhukkubsatee hin beeku, ani maatii biran ture.
Biyya namaa keessatti rakkachuun immoo qormaata biraati. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee kan itti gadde kana.
Waggoota kanneen keessattis shaakala taasisaa turre. Yeroo sana Magarsaan hamma tokko of fuldura argee fiiga ture.
Dura jireenyi keenya magaalaa Riyoo ture. Ta'us Riyoon waan ho'uufi bakki leenjii paaraalimpikii Saa'o Pooloo mijata waan jedhamneef gara Saa'o Pooloo jijjiirre.
BBC: Paaraalikmpikii Riyoo irratti Itoophiyaan medaaliyaa tokko argatt turtee. Innuu isa ati argattedha. Meedaaliyaan sun kan eenyuti jedhamaarree?
Atileet Taammiruu: Eeyyee anuma bira jirti isheen. Ishiin kiyyuma. Ishii akka ilma kiyyaan ishii ilaala.
Dorgommii Paaraalimpikii booda yeroo biyya Biraazil tures dorgommii gara agaraa keessa hirmaachaa medaaliyaa warqiifi meetii argachaan ture.
BBC: Wayita biyyatti deebi'uf carraaqaa turtaniitti osoo Itoophiyaatti imaluun mijatuu baate biyya biraatti imaluuf yaada qabdu turtanii?
Atileet Taammiruu: Namoonni gara biyya Kaanaada akka deemnuuf yaalaa turani. Haa ta'u malee, yaaliin Kaanaadaa sunis hin milkoofne.
'Aangoon atileet Hayilee dhiibbaa dhiigaaf saaxile'
BBC: Amma biyyatti deebitaniittu? Karoorri keessa itti aanuu maali?
Atileet Taammiruu: Karoorri keenya shaakala keenya itti fufuudha. Magarsaanillee yaala barbaada.
Olompikii dhufu irratti hirmaannee qabxii Riyootti fidne caalaa galmeessuudhaafi kaayyoon keenya. Paaraalimpikii Tookiyoo irratti warqii fiduufi riikardii cabsuuf yaada qabna.
Atileet Magarsaa Taasisaan dhaloonni isaa Walisoodha. Yeroo Itoophiyaadhaa deemu dorgommi meetira 400 irratti hirmaachuuf ture. Ta'us gulaallii irratti waan hin milkoofneef fiigicha xumuraa irratti hin hirmaanne.
BBC: Wayita Itoophiyaa baatu fayyaan ijikeetii akkam ture? Haala amma irra jirtuun garaagarummaa qaba ture?
Atileet Magarsaa: Eeyyeen garaa garummaa qaba. Dura rakkoo saayitii (qaroo) malee ijakoo takka dhukkubsadhee hin beeku. Ijikoo qaroo gabaabaadha (short sight). Hir'ina qaroo dheeraa (long sight) nan qaba jechaadha.
Hanga dhihootti dubbisuu dabalatee waan fedhe hojjechuu nan danda'a ennaa sana. Booda garuu osoon Saa'o Poolootti shaakalarratti rakkoon na mudate.
Goodayyaa suuraa Atileet Magarsaa Taasisaan biyya Biraazilitti ija isaa si'a jaha wal'aansa baqaqsanii hodhuu taasisuu isaa hima
Yaala gahaa waan hin arganneef ijikoo bakka duriiti deebi'u hin dandeenye.
Oppiraasiyoonii (yaalii baqaqasanii hodhuu) si'a jahan ta'e. Al takka lamaan waan sirratuu danda'udha garuu kan na yaalaa turani ogeessota miti.
BBC: Amma qofaakee socho'uu hin dandeessuu?
Atileet Magarsaa : Qofaakoo baay'ee na rakkisa. Hin danda'u sirumaa. Akkasitti deemun ni ulfaata. Ulee adii qaroo dhabeeyyiin fayyadamaniin fayyadama.
Atileet Daraartuu Tulluun yeroof pirezidantii federeeshinii atileetiksii taate
BBC: Kana booda karoorrikee maali?
Atileet Magarsaa: Osoo ummanni keenya nu gargaare ija koo yaalamee shaakalakootti deebi'uu nan danda'a. Rakkoo guddaan isa kana.
Hanga ijikoo yaala argatutti ispoortiin natti ulfaata. Yoo ijikoo yaalame Paaraalimpikii Tookiyoo irratti hirmaachuu nan barbaada.
BBC: Lamaan keessanuu guddaa galatoomaa.
Isinillee galatoomaa dhimma keenya sirriitti waan hordofaa turtanif.
Itoophiyaan Fayyisaa Leellisaaf simannaa gootaa gochuufiif jirti
14 Hagayya 2018
Hayilee G/Sillaase: Aangoon dhiibbaa dhiigaaf na saaxile
Atileet Daraartuu Tulluu: 'Ji'a lama qofaaf pirezidantii ta'uun tajaajila'
16 Sadaasa 2018